Social Account ဆိုင်ရာ Security Services များ | Online Service Center Myanmar -->
Social Account ဆိုင်ရာ Security Services များ
လူတော်တော်များများဟာ Internet ကိုအသုံးပြုနေပြီး Security ဆိုတာကိုတောင် ဘာမှန်းမသိကြတာများတယ်
Social Media, Social Account, Social Network, တွေကြားမှာ ကျင်လည်နေပြီး Security ပိုင်းကို မေ့ဖျောက်ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး အလေးမထားလို့ လည်းမဖြစ်ပါဘူး ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက် တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာနယ်ပယ်ထဲမှာ ၀င်ရောက်အခြေချတယ် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြုတယ်
ဆိုရင် Security ဆိုတာဘာလည်း ဘယ်လို အသုံးပြုရတာလည်း ဆိုတာကို သေခြာလေ့လာသင့်ပါတယ်။
လူသုံးများနေတဲ့(လူသိများတဲ့) Gmail, Facebook, Messenger, Viber, Wechat, LINE, Whatapps, Twitter, Google+, Yahoo, Linkedin, Coc Game ( နောက်ထပ်အများကြီးကျန်ပါသေးတယ် ) တို့ လို Social Media တွေ Social Account တွေထဲက တစ်ခုခုကို အသုံးပြုနေပြီဆိုရင်တော့ Security ဆိုတာကို မဖြစ်မနေ အလေးထားဖို့လိုလာပါပြီ ကိုယ် ကိုယ်တိုင် Security ပိုင်းကို အလေးထားပြီး လေ့လာလိုက်စားပြီး ကိုယ့်ရဲ့Social Network အသုံးပြုတဲ့ Account တွေကို လုံခြုံအောင်လုပ်ထားဖို့ လိုပါမယ် ဒါမှလည်း Hacker, Attacker တွေ ရန်ကနေ ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Security ကိုအလေးမထားရင် လုံးဝမှ နားလည်မထားရင် Hacker, Attacker တွေရဲ့လှည့်စားခြင်းတွေကို အလွယ်တကူ ခံရနိုင်သလို မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ Account တွေလည်း အလွယ်တကူနဲ့Recovery Test လုပ်ခံရပြီး အခိုးခံရတာတွေ အဲ့ဒီ အခိုးခံရတဲ့အကောင့်တွေကို အသုံးပြုပြီး PA( Personal Attack ) လုပ်ခံရတာတွေ တစ်နေ့ မဟုတ် တစ်နေ့ မလွဲမသွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ် ။
Security ဆိုတာကို အလေးမထားရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ..?
ဘာတွေဖြစ်နိုင်လည်းဆိုရင် Security ပိုင်း အားနည်းတဲ့အတွက် Account တွေကို Hack လုပ်ခံရဖို့ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ် မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် Facebook , Gmail နဲ့Coc Game ဆော့တဲ့ Account တွေ Hack ( ခိုးယူခြင်း ) ခံရတာများပါတယ် ဘာလို့အခိုးခံရလည်း စစ်တမ်းကောက်ယူတဲ့အခါမှာ Security ပိုင်းကို
အလေးမထားတဲ့အတွက် ခိုးယူခြင်း ခံခဲ့ရတာများပါတယ် Phishing ဆိုတာဘာလည်းမသိ SE ဆိုတာ ဘာလည်းမသိတဲ့အတွက် အခိုးခံရတာများပါတယ် သုံးစွဲသူ ပိုင်ရှင်ရဲ့ ပေါ့ဆမှုတွေကြောင့်သာ ခိုးယူခံရတာ ပါ။
အဲ့ဒီလို Account တွေ ခိုးယူခံရတဲ့အခါ အကောင့်ထဲက အချက်အလက်တွေကို အသုံးပြုပြီး ငွေညှစ်ခံရ
Sex Page, Sex Account တွေအဖြစ်နဲ့အရှက်ခွဲခံရ ကိုယ်မလုပ်ပဲ ကိုယ့်အကောင့်တွေကနေ မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို တင်တာတွေ Share တာတွေပြုလုပ်ခံရတာတွေနဲ့အမျိုးမျိုး
ခြိမ်းခြောက်ခံရတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တာများပါတယ် အဲ့ဒီလိုတွေ ဖြစ်တော့မှ အဖေကယ်ပါ အမေကယ်ပါနဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံရောက်ကြရသလို တစ်ချို့ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် သတ်သေတဲ့အထိ လုပ်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် Security ပိုင်း အရေးပါပုံကို နားလည်သဘောပေါက်ကြပြီထင်ပါတယ် ကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီး
မိမိတို့ အသုံးပြီးနေတဲ့ Account တွေကို လုံခြုံအောင် လုပ်ထားကြဖို့ လိုပါတယ်။
Security မြင့်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ..?
မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ Gmail, Facebook, Messenger, Viber, Wechat, LINE, Whatapps, Twitter, Google+, Yahoo, Linkedin, Coc Game တွေမှာ Security ပိုင်းတွေပြုလုပ်ဖို့ အတွက် ကဏ္ဍလေးတွေ ပါဝင်ပါတယ် သေခြာလေ့လာပြီး လိုက်လုပ်ထားဖို့ လိုပါမယ် ဒါဆိုရင် Security ပိုင်းမြင့်သွားတဲ့အတွက် Hacker တွေ Attacker တွေ အလွယ်ကူနဲ့မိမိတို့ အကောင့်တွေကို အလွယ်တကူ ခိုးယူလို့ မရတော့ပါဘူး။
Security ပိုင်း ဘာဆိုဘာမှနားမလည်ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ..?
တကယ်လို့Security ပိုင်းတွေကို ဘာဆိုဘာမှ နားမလည်ဘူး လေ့လာဖို့ လဲအချိန်မပေးနိုင်ဘူး ဘယ်လိုလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်များ OSC-Myanmar ကနေ မိတ်ဆွေတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ Account တွေ Security မြှင့်တင်ပေးဖို့ ကို ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ် အမှန်တကယ်တမ်းပြောရရင် မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ Account တွေကို မိမိတို့ ဘာသာ လုံခြုံရေး မြှင့်တင်ပြီး သုံးတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ ကျွန်တော် ဒီ Services ပေးဖြစ်သွားတာကလည်း ဘယ်လောက်ပဲ Security ပိုင်းတွေ အလေးထားဖို့ ပြောပြော အလေးမထားကြပဲ ပေါ့ပေါ့ဆဆနေ ပေါ့ပေါ့ဆဆသုံးပြီး ကိုယ်နဲ့ ပဲ မဆိုင်သလိုလုပ်နေကြတဲ့သူတွေကြောင့်ပါ။
အလေးမထားပဲ ပေါ့ပါ့ဆဆနေတော့ ဘာတွေဖြစ်လည်းဆိုရင် Recovery Test လုပ်ပြီး Account တွေ မကြာခန Hack လုပ်ခံရတယ် Phishing တွေ မကြာခနဆိုသလို မိကြတယ် ဟိုတစ်ယောက် အကောင့်အခိုးခံရပြီး အရှက်ခွဲခံရပြန်ပြီ ဒီတစ်ယောက် အကောင့်ခိုးခံရပြီး အရှက်ခွဲခံရပြန်ပြီဆိုတာမျိုးတွေ ခနတိုင်း ကြုံတွေ့ လာရတာများတော့ အဲ့လို အရှက်ခွဲခံရတာတွေ အရှက်ကွဲတာမျိုးတွေ မဖြစ်အောင် ကျွန်တော်က ဒီ Service ပေးနေတယ် Security ပိုင်း နားမလည်ဘူး မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင် လုပ်ပေးမယ် လာခဲ့လို့ခေါ်ပြီး Security ပိုင်းကို မြှင့်ပေးတဲသဘောပါပဲ။
ဒီလို Services ပေးတော့ ၀န်ဆောင်ခ မယူဘူးလားဆိုရင် ယူပါမယ် ဘာလို့ ယူလည်းဆိုရင် Security မြှင့်ပေးဖို့ဘာတွေဘယ်လို လိုက်နာရမယ် ဘာတွေဆောင်ရမယ် ဘာတွေရှောင်ရမယ် ဆိုတာကအစ လုပ်ပေးဖို့သင်ပေးဖို့ကျွန်တော့်အချိန်တွေထဲကဖဲ့ပေးရမှာမို့ ပါ။
ယခင်တုန်းကဆိုရင် အခမဲ့ Security ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို မြှင့်ပေးတာတွေ သတိပေးတာတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် တန်ဖိုးမထားကြတာတွေ မသိသလို ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်သလို လုပ်သွားကြတာတွေ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် အချိန်ကြေးနဲ့Knowledge Sharing လုပ်တဲ့ကြေးယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့် Account တွေကို ကိုယ် ကိုယ်တိုင် Security မြှင့်ထားပြီးမှ စိတ်ချ လက်ချ သုံးကြပါ။
အကယ်၍ Security တွေ မြှင့်ပြီး စိတ်ချလက်ချတော့သုံးချင်တယ် မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင် ဒီ Services ကိုမမေ့ပါနဲ့အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးသွားပါ့မယ်။
Add Security Service
Security မြှင့်တင်ခြင်း ပြုလုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပါက...
OSC-Myanmar အနေနဲ့အခကြေးငွေဆိုတာထက်
အကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကို တန်ဖိုးနည်းနည်းနဲ့ 
အကောင်းဆုံး Service ပေးနိုင်ဖို့ ကိုပဲ အမြဲတမ်းရှေ့ တန်းတင်ထား
အားလုံးကို သိစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ^_^ ^_^ ^_^
နည်းပညာပိုင်းမှာ ဆရာမကျပေမယ့် OSC-Myanmar
Admin Team အနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကို
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။
#Boost_Training ( Boost ပြုလုပ်နည်းသင်တန်း ) တက်ချင်တယ်။
#Boost_Error တွေလည်း ရှင်းချင်တယ်။
ဆိုပါလျှင်.... အောက်ပါ ဆက်သွယ်ရန်များမှာ ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
🚹 - Aung Kyaw Soe ,
ကိုယ်ဖတ်လို့ သိသွားပြီဆိုရင်လည်း ကိုယ့်အသိမိတ်ဆွေ